Ngokuzonwabisa uClair De Lune Jacuzzi+Waterfall Alibaug - I-Airbnb
Ngokuzonwabisa uClair De Lune Jacuzzi+Waterfall Alibaug
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguVineeth
Ifakwe embindini wendawo entle, eyilwe ngohombiso lwangoku kunye neendawo zokuhlala ezinobuhlobo kusapho, iClair De Lune yindawo eNtofontofo yaBucala ye-2BHK Villa yokuPhumla kunye neRendezvous eneLush Green ejikeleze i-Alibaug. Ungasathethi ke, i-10 min drive ukusuka kulwandle lwaseVarsoli, isibhakabhaka esivulekileyo sabucala iJacuzzi, indawo enengca, kunye namagumbi apholileyo afanelekile ukubaleka ngokukhawuleza!
Le ndlu inamagumbi ama-2 okulala, indawo yokuHlala-yokutyela, iJacuzzi yangaphakathi enophahla oluqhutywa ngamanzi avuleleke esibhakabhakeni nasekhitshini. Igumbi lokuhlala liza nesofa yezihlalo ezi-5, iTV yeLed, itafile yokutyela yezihlalo ezi-6 kunye nokufikelela kwiJacuzzi enengxangxasi.
Onke amagumbi okulala kunye neendawo zokuHlala zinezifudumezi zomoya (AC)
Igumbi ngalinye lokulala liza nebhedi yenkosi enewodrophu.
Igumbi lokulala lokuqala likumgangatho ophantsi, likwanokufikelela ngokuthe ngqo kwi-jacuzzi.
Igumbi lokulala lesibini likumgangatho wokuqala kunye nesilingi yesibhakabhaka kunye nokufikelela kwiverandah ngokunjalo.
Ikhitshi iza nefriji enamagumbi amabini efriji, imicrowave, itoaster, umenzi weSandwhich, iketile yombane kunye nesitovu segesi. Sinezixhobo ezisisiseko zeTea-coffee-Maggie.
Ukutya, iindawo zokutyela ezininzi zihambisa kule ndawo.
Ikhaya lethu limalunga nemizuzu engama-30 ukusuka kwijethi yaseMandwa, ikwindawo ezolileyo enohlaza macala onke, iiVenkile ezikufuphi kunye neendawo zokutyela zikwikhilomitha enye. Ulwandle lwaseVarsoli lumalunga nemizuzu eyi-10 xa uqhuba.
Sifumaneka ngokufowuna kunye ne-app ye-app, umnakekeli uya kukunceda ngokungena kwakho kwaye uhlale kwaye uyafumaneka kwisiza kude kube ngu-7pm.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Alibag